ImgLikeOpera: Phatha ukuthi iziphi izithombe ezilayishwa yiFirefox | Kusuka kuLinux
Ngisanda kukutshela mayelana ezinye iziphequluli esingayisebenzisa ku I-GNU / Linux Yiqiniso? Ngikulethela okuhle kakhulu izandiso akhona komunye wabo, kuleli cala Firefox.
La isandiso kubizwa ImgLikeOpera (ILO) futhi njengoba negama lalo liphakamisa, lokho elikwenzayo ukuhlinzeka Firefox, ukusebenza isiphequluli saseNorway esinakho ngokwendabuko. Uma ungumsebenzisi we Opera Uzokwazi ukuthi inenketho yokukhetha ukuthi izithombe zilayishwa kanjani kumawebhusayithi esiwavakashelayo, njengoba kungabonakala esithombeni esingezansi.
Manje, Opera Isinikeza kuphela izinketho ezi-3:
Nokho, ImgLikeOpera Isinikeza izinketho ezi-4 ezithuthukisa ukusetshenziswa kwalesi sandiso:
Izithombe kuphela ezivela kusayithi.
Lona isandiso ilusizo ngokwedlulele lapho unokuxhumeka okuhamba kancane (njengakwami) futhi kuyalungiswa impela. Ingafakwa kusuka kufayela le- umphathi we-plugin de Firefox futhi ungathola imininingwane eminingi ku- iwebhusayithi. Kusamele ngibheke ukuthi ngabe Chromium Ingabe unayo umphelelisi Kuyafana. 😉
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » ImgLikeOpera: Phatha ukuthi imiphi imithwalo yeFirefox
Ngisacabanga ukuthi i-OperaNext ilayisha amakhasi ngokushesha, inkinga ukuthi izingosi zeWordPress azilayishi kahle ... futhi ukubhala izindatshana okufanele ngisebenzise iFirefox.
Ungakhathazeki nge-Opera Next. Kuyiqiniso ukuthi iyashesha impela futhi ilawula isilondolozi ngokungafani nesinye isiphequluli, kepha inezinkinga ezimbili ezinkulu:
1- Akusebenzi kahle kwamanye amasayithi (isibonelo i-WordPress).
2- Isebenzisa i-RAM eningi kakhulu.
I-Kubuntu 11.10 Beta1 iyatholakala ukulanda